एक्कासी किन हास्यो कहिलै नहास्ने कालभैरवको मूर्ति ? के हुन्छ अब ? - Kohalpur Trends
काठमाडौंको हनुमानढोका दरबारको प्रांगणको उत्तरपश्चिमी भागमा काल भैरवको ठूलो प्रस्तर मूर्ति छ । कालो प्रस्तरबाट बनेको यो मूर्ति अति ठूलो र ड’ रलाग्दो छ । यो मूर्ति १२ फिट अग्लो छ । यो मूर्ति प्राचीन कालतिर बनाइएको मानिन्छ तर यस स्थानमा यसको स्थापना भने कान्तिपुरे राजा प्रताप मल्लले गराएका हुन् । कतिपय श्रद्धालुहरू काल भैरवलाई काली मानेर पनि पूजाआजा गर्ने गर्दछन् ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
The submit एक्कासी किन हास्यो कहिलै नहास्ने कालभैरवको मूर्ति ? के हुन्छ अब ? appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: मनोज गजुरेलको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख
Next Next post: शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान